Archive du 20190509
Rivo R sy Lalatiana A Raikitra ny ady…
Ny alatsinainy 06 mey lasa teo no namoaka fanambarana maneho ny fisiana karazana sivana sy antsojay tsy fahafahan’ny antenimierandoholona mandefa vaovao amin’ny haino aman-jerim-panjakana TVM sy RNM Atoa Rivo Rakotovao, filohan’io andrim-panjakana io.
Ivontoeram-panofanana arak’asa etsy Ambohidratrimo Notsidihan’ny talen’ny UNESCO
Tonga nitsidika ny ivontoeram-panofanana arak’asa etsy Ambohidratrimo omaly ny tale rejionaly eo anivon’ny Unesco izay rafitra iraisam-pirenena eo anivon’ny firenena mikambana, Ann Therese Ndong Jatta.
Jean Nirina HAFARI Nafahan’ny fitsarana madiodio
Nivoaka omaly ny didy momba ilay raharaha kianjan’Anosizato izay nitoriana karana mpanam-bola iray ny filoha nasionalin’ny fikambanana HAFARI Malagasy Rafanomezantsoa Jean Nirina.
Fiangonana Advantista Hitsabo maimaimpoana ny mpiray tanindrazana
Ny fikarakarana ny fahasalamana no anisan’ny olana goavana sedrain’ny isan-tokantrano amin’izao noho ny halafosan’ny sarany aloa amin’ny dokotera, eny fa na dia hanao fizahana fotsiny aza.
Baolina kitra vehivavy Nahazoam-bokatra ny andro faha-2
Nahazoam-bokatra indray ny andro faha-2 amin’ny fifaninanana DEFF 3 2018 “dingana faha-3 amin’ny Diviziona Elite vehivavy”
Lionel Messi Nilaozan’ny « Bus » mpitondra ny Barça
Rehefa tsy mety izay tokoa ny atao dia tsy mety.Sady efa resin’i Liverpool 4-0 ny FC Barcelone ny alarobia alina teo no mbola adinon’ny “Bus”
Ligue des Champions Adin’ny samy Anglisy ny famaranana
Nampangitakitaka ! Izay no mahafintina ny lalao nifandonan’ny ekipan’ny Ajax sy Tottenham miverina manasa-dalana faharoan’ny ligue des champions halina.